[नियात्रा] आबुइ ! बन्दीपुर - पोष चापागाई | आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies, आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies,
[नियात्रा] आबुइ ! बन्दीपुर - पोष चापागाई
२०७४ पौष १३, बिहिबार ०६:२७ pm | आजको पत्रिका
घले गाउँ जान काठमाडौंबाट डुमे्र बजार पुग्यौं । चार जना । छिप्पिएका । अहिले दिउँसोको तीन बजेको छ । चिया खाँदैछौं ।
बन्दीपुर जाने ? आफ्नो गाडी छदैछ ।
जाने नि ।
'आजसम्म म त्यहाँ पुगेको छैन । राम्रो छ भन्छन् ।' – म ।
आज बन्दीपुर बसौं । हेरौं । घुमौं । भोलि घले गाउँ जाउँला । हुन्न ? अहा, कति मज्जाको प्रस्ताव भनें मैले ।
चितायो कि बितायो । बन्दीपुर जाने नै भयौं । म मख्ख परें ।
मूल सडक छोडेर बन्दीपुर दर्शन गर्न ठाडो उकालो बाटोतिर लाग्यौं ।
लण्ठु म, गाडि चलाउन जान्दिनँ । श्रीमती कै भरोसामा थिरिथिरि नानी थिरिथिरी गर्दैछु । भोग्दैछु जीवनका भुक्तमानहरु । उनी उकालामा गाडि कुदाउदैंछिन् । उकालामा भित्तो छ । भित्रामा घाँस, रुख, ढुङ्गा छन् । लहलह छैन वन । बालुुवा पो छ त भित्तामा ।
कुइक्क घुम्दछ बाटो । यताबाट उता । उताबाट माथि । माथिबाट झन् माथि । म तल पानी देख्छु । गाडि कुदेको हेर्छु । लहलह हुन्छ मन । रमाइलै रमाइलो । माथि डाँडामा पुग्यौं । राम्रो ठाउँ रहेछ ।
बसौं है एक छिन ? –म
हुन्छ । साथीहरु
साथीहरु चौतारमा बसेर गफ चुट्न थाले ।
पर वरपीपलको रुख मुनि धारो जस्तो पाइपबाट पानी झरीरहेको देखें । हौ, झ्याम्म वर पीपल । हेरांै हेरौं लागिरहने ।
त्यहाँ गएर पानी खाएँ । एक अन्जुली । मीठो रहेछ ।
नजिकैको छाप्रे घरको आँगनमा दुईजना बाहरु र एक आमै भलाकुसारी गरिरहेको देखें । नजिकै गएँ । सोधें– यो ठाउँलाई के भन्छन् ?
बन्दीपुर, छाप गाउँपालिका पी घर । ए, भनें अनि साथीहरु बसेतिर लागें ।
के भनेको होला पी घर ? पी घरको अर्थ के होला ?
एक्लै छु । उ पर छन् चौतारामा साथीहरु । बोल्दैन पी घर । शान्त, मनोरम, आह्लादकारी लाग्यो छाप गाउँपालिका । मान्छे नै छैनन् । को बोलोस । फेरि उकालो लाग्यौं ।
वोर्डमा पढें । बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र । अलि पर पुगेपछि तीस, चालीस वटा जति बाख्राका सन्तान आए । बाटै बाटो । मनै मन भनें – यिनैको अनुसन्धान गर्ने होला ।
जाँदैछौं । हेर्दैछु । चील्लो छ रोड । हन, यो रोडमा किन तेल घसेको होला । हेर्छु यता उति । के को तेल घस्नु नि । ओसिलो पाटो । घाम नलाग्ने भएकाले सधैं सीत झरेर बाटो चिल्लो देखिएको पो रहेछ ।
गाइड थिएन हामीसँग । दर्शक हामी । प्रदर्शक हामी । गाइड हामी । आँखाहरु सुन्दर गाइड ।
फुत्तै हाम्रो गाडि बजार भित्र पस्यो ।
आयो बन्दीपुर ?
डुम्रेबाट बन्दीपुर कति कि.मि. ? सोधें कुनै ड्रइभरलाई । उसले भन्यो – नौ कि.मि.
ए, हो र ? हामी त एकै छिनमा पो आइ पुग्यौ त । उ हाँस्यो । उकालामा उभिएको बन्दीपुर बजार । गाडि पार्किङ गर्ने गाउँ कता ? तेर्सै तेर्सै पीचै पीच अलि पर गयौं । एक छिन उभियौं । मैले चारैतिर हेर ें। तल डरलाग्दो खोच देखिन्छ । भीरैभीर ओरालो झर्दै तल सम्म पुग्छन् मेरा आँखा । फनक्क फिरेर फेरि अघिकै ठाउँमा आइ पुग्छन् ।
साडकबाट माथि हेर्छु । अग्लो न अग्लो डाँडो । पाखो । भीर । पहरो देखिन्छ । पहरामा छैन केही । ढुङ्गा अनि कतै कतै एक फुटे घाँस ।
साँझका घाम छन्, पाखै भरी ।
मान्छे देखिन्न । शुन्य, शुन्य । फर्कौ । बास वस्ने होटल खोजौं । पछि डुलौला ।
फर्कियौं । बजार नजिकै गडि राखेर होटल खोज्न थाल्यौं । हिड्दा हिड्दै सडक मुनि देखें । विनय चर्च ।
एउटा हे¥यो । मन परेन । अर्को हे¥यो पैसा मिलेन । अरु खोजौ । हुन्छ ।
सहर भित्र पस्यौं । अहा शान्त मान्दिरको प्राङ्गणमा डुले जस्तो लाग्यो । जाँदैछौं । ओरालो झर्दैछौ । अव सम्म आयो । ढुङ्गा छापेको छ सवैतिर ।
भुइँ त माटो नभएको शिव नगरी कैलास पो देखे । बन्दीपुर बजार ।
सेते सेतीको एक जोडि लफ्याङ्ग लफ्याङ्ग हिड्दै छ । भुइँमा एक हुल परेवा झुरुरु उड्दै खाँदै पर्यटकलाई पंखा हंकिदिदैछन् । ठूलो बाटो होइन आँगन हो घरको । त्यस्तै लाग्छ बजार ।
पुराना धेरै घर भएको पुरानु बन्दीपुर बजार शान्त, सफा, सुन्दर र मनभावन लाग्यो मलाई । यति सुन्दर पुरानु बजार मैले अन्यत्र देखेको थिइनँ । मलाई लाग्छ नेवारी संस्कृति लाई जोगाएर राख्ने नेपालको एक मात्र शहर बन्दीपुर नै हुनुपर्छ । घरको खाँवोमा विहानै उठेर बुहारीले रातो माटोले लिपे जस्तो लाग्ने घरका भुई र खम्बाका फेदहरु । (तर माटो होइन रङ् दलेको)
बजार भित्र गाडि पस्न नपाउने व्यवस्था । आज पनि यो संभव छ र ? रहेछ गाडि, मोटर साइकल, साइकिल केहीको हर्न बज्दैन । हिड्दा हिड्दै मैले साथीलाई भने – डेरा लिएर दुई चार महिना यतै बसौ कि जस्तो पो लाग्यो मलाई ।
दि क्याफेमा दुईचार विदेशी पिउदैछन् । ईटा र ढुङ्गाको भुइँमा हिड्दै गर्दा मलाई सिक्किम बजारको याद आयो । उस्तै छ । सिक्किममा मान्छेको भीड । यहाँ शान्ति नै शान्ति ।
वल्लो छेउबाट पल्लो छेउनिर पुगेपछि, बैदार बाको घरमा बास माग्यौ । बजार भित्र । वा कि हँसिली अधवैसे नातिनी वुहारीले पैसा घटाइदिइन । त्यही बस्ने भयौं ।
म उभिएँ । हेरें । वाको घरै अगाढिको पद्म पुस्तकालय । त्यही छ विन्द्यवासिनी देवीको मन्दिर । एक दुई मान्छे हिड्दै छन् । डोकोमा साग बोकेर यता आउदैछिन आमै ।
भित्र जाने होइन ? जाने नि ।
भित्र पस्ने बित्तिकै वेकरीको वास्ना आयो । माथि लज । तल बेकरी बनाउने यस्तै रहेछ ।
भर्याङबाट माथि चढ्यौं ।
ठोकिएला । होस गरेर जानुस ।
माथि चढेर भुइँ हेर्दा त कति सफा कति । मेरो दिङ्लाको घर पनि यस्तै हो । माटोले लिपेको काठ र ढुङ्गाले बनेको । तर यो सफा छ । रङ पोतेर नयाँ बाथरुम बनाएर चिटिक्क पारेको ।
लिपिष्टक पाउडर लाएर फुरुङ्ग परेकी नानी जस्तो घर ।
सामान राख्यौ । कोठामा साँचो लायौं । घुम्न निस्कियों ।
टुडिखेलतिर घुम्न जाने होइन ?
वा कि बुहारीले यताबाट जानुस् । छोटो र सजिलो हुन्छ भनिन् । हामी त्यसै बाटोबाट हिड्दैछौं ।
हौ के विधि रमाइला चिटिक्क घर । म दुई हप्ता अघि मात्रै वैङ्कक डुलेर फर्केको मनुवा हुँ त्यहाँका घर देख्दा यति राम्रा घर त संसार मै हुन्न् होला जस्तो लाग्थ्यो । अहिले बन्दीपुर बजारका घर देख्दा मनमा आयो यति मज्जाका घर त अन्यत्र छैनन् होला ।
हामी गाडिघरमा गाडि थन्काएर टुँडिखेल जान ओरालो झर्दैछौ । ओरालो सकिएपछि खोल्सो आयो । खोल्सामाथि होटलमुनि दश बाह्रवटा टेन्ट घर देखें । होटलले डलर साट्न बनाएका होलान् यी टेन्टहरु भन्ने लाग्यो मनमा । टेन्टमाथिका होटलको नाम पढें – बन्दीपुर गेष्ट हाउस । गेष्ट हाऊस माथि लहरै उभिएका पाँचवटा पीपलका बोट देखें । उकालो चड्दैछौे पीच सडकमा । जन्मिदै वोकेर ल्याएका पाउहरुले टेकेर हिड्दैछों । साँझ परि सक्यो । अध्यारो भएको छैन । अलिकति तेर्साे हिडेपछि, अलिकति उकालो चडेपछि पर लमतन्न सुतेको टुडिखेल देख्यौ । मैले देखें । टुडिखेल र मैले हेराहेर ग¥यौ । मलाई लाज लाज पो लाग्यो । नबवधुलाई पहिलो पटक देखे जस्तो सकपकाएँ म ।
मानव वितृष्णा व्यापक हुन्छ । वितृष्णाले जन्माएको तृष्णामा लम्पसार परेर मान्छे इहलोकमा विचरण गर्छ । बुभुक्षा शान्त पार्न खोज्छ । कसैले भोक भेटाउन सक्छ । कसैले सक्दैन । टुडिखेल दृश्य चित्र ः दुडिखेलको एक छेउबाट सडक उकालो लाग्छ बजारतिर । हामी त्यही छौ सडकमा । मैले हेरें । देखें । होइन एक टक हेर्देछु । पर्खाल आयो ढुङ्गाको । पर्खाल सँगै गोलो पोखरी देखियो पानी नभएको । त्यसै पोखरी भित्र सानु अर्को पोखरी देखें त्यो पोखरीलाई पनि पर्खालले घेरेको छ । त्यहाँ पनि पानी छैन । सानु सुख्खा पोखरीमा सानु मज्जाको घैटो छ । घैटा भित्र पानी छ कि छैन । थाहा भएन ।
छेउबाट हामी चारै जना टुडिखेलभित्र पस्यौं । डिलै डिल हिड्दैछौ । लाम्चो टुडिखेलको चारैतिर अन्दाजी छ फिटको बाटो छ । बाटोमा ढुङ्गा छापेको । छापेका चिल्ला ढुङ्गामा टेक्दै हामी गइरहेका छौं । पस्ने वित्तिकै अग्ला, झ्याम्म छ वटा पीपलका बोट देखें ।
हामी पछिपछि चार जना पचास जतिका मान्छे आए । हामीतिर हेरेर सोधे–त्यो हिमालको नाम के होला ? यहाँ लेखेर राखेको भए आउने सवैले जान्ने थिए होला ?
मैले भने –हो, तपाइँले भनेको ठकि हो । हिमालको सामान्य चिनारी दिएको भए राम्रो हुने थियो ।
मैले हिउँतिर हेरें । कहिल्यै खान नपुग्नेले अगाडि थाल भरी खीर देखे जस्तो । मेरो मुखबाट थुक पानी झर्न थाल्यो । म पग्लिएँ । मेरा आँखा, मन, अन्तस्करण सवै पग्लिएर बन्दीपुरको टुँडिखेल भरी वग्न थाले ।
सुन्दर हिमाल देखेर मेरा आँखाबाट हर्षाश्रु झर्न थाल्यो ।
शान्त, ज्ञानी, धुरन्धर शास्त्र वेत्ता महापण्डित जस्तो ज्ञान निस्णात हिमाल बन्दीपुरको टुडिखेलतिर हेरेर मुसुमुसु हासी रहेको देखें । जति हे¥यो उति त्यो हिमाल सुन्दर, अझ सुन्दर, झन सुन्दर लाग्यो । भनेकै छ – क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रुपं रमणीयतामा ।(प्रत्येक क्षण नयाँ नयाँ लाग्ने कुरा नै सौन्दर्य हो । )
फर्को रात पर्यो । साथीहरु
हुन्छ – म
कुनै न चिनेको मान्छेले उसको साथीलाई यसो भनेको सुनें – डुम्रेबाट बन्दीपुर आउन अचेल गाडिमा नौ कि.मि. हिड्नुपर्छ । पहिले डुम्रेबाट बन्दीपुर हिडेर आउँथे मान्छे । हिड्न सक्नेलाई डुम्रे – बन्दीपुर आधा घण्टा मात्रै हो । अचेल पनि हिड्न सक्नेहरु ढुङ्गा छापेको त्यो बाटोमा लुखुर् लुखुर् हिडेर आधा घण्टामा बन्दीपुर बजारमा आइपुग्छन् । दिङ्लामा ठुइँकि ठुइँ उकालो चढेको झझल्को आयो । कुरा सुनेर ।
बैदार बाको घरमा (होटल) मा पुग्यौं । खाना पाकी सकेको रहेछ । गयौं । बस्यौ । खायौं । मीठो ।
आमाले दिङ्लामा चुलो नजिकैको चौकामा झर्के थालमा पानिउँले भात पस्किदिएको याद आयो ।
ओछ्यानमा सुतेर खाटमाथिको दलिनतिर हेरें । दलिनमा कालो रङ पोतेको । धुलो नझरोस भनेर दुई दलिनका वीचमा माटोले लिपेको उस्तै, दिङ्लाको मेरो घर जस्तै । हो त मलाई दिङ्लाको मेरै घरमा सुते जस्तो लाग्दै छ । भित्तो, भुइँ सबै उस्तै देख्छु ।
राती मज्जाले निद्रा लाग्यो । बनारसबाट दिङ्ला पुगेर वा आमाको कोठा नजिकै खाटमा सुते जस्तो भुसुक्कै निदाएँ ।
भइ त गो उज्यालो विहान ।
नारायण जी र म मात्रै घुम्न निस्कियौं । विन्धवासिनी देवीको मन्दिर घुम्यौं । पूर्ण परिक्रमा ग¥यौं । म उत्फुल्ल भएँ । मन्दिर सँगैको घरतिर देखाएर यो कस्को घर हो ? भनेर नारायण जीले त्यहीको मान्छेलाई सोध्नुभयो । उसले भन्यो – कुसुम श्रेष्ठको । को कुसुम ? उही पुतली सडक वाला वकील हो भनेर मैले सोधें ।
तेर्सो लाग्यौ ढुङ्गा छापेको भुइँमा टेक्दै । पुराना घर । त्यति सफा देखिन्न । त्यही रहेछ नोट्रेडम स्कूल ।
नारायणजीले भन्नुभयो – यो नेपालको प्रसिद्ध स्कुल हो । यसका विद्यार्थी वोर्ड फष्ट भएका थिए । यसको संचालन विदेशीहरु गर्छन् । स्कूलसँगै देखें चर्च घर । फर्कियौं ।
हामी पुग्दा महिलाहरु वाहिर निस्किएर हामीलाई खोज्दै हुनुहुदोरहेछ । चारैजना खड्ग मन्दिर तिर लाग्यौ । गेट । खुड्किला । उकालो । खुड्किलामा ईटा छापेका । ठुइँ ठुइँ गयौं । शिरानमा पुग्यौं ।
मन्दिर अगाडि मन्दिरलाई रुगेर बसेका झ्याम्म वर पीपलका बोट देखें । मन्दिर भित्र ठूलो आँगन । खालि खालि रहेछ । त्यहाँ मौलो रहेछ मेरो कुम कुम आउने । मन्दिरमा ढोका लाएको रहेछ । धुम्यौ फर्कियौं ।
वर पीपल छेउमा उभिएर खिचेका फोटामा बन्दीपुरको सुन्दर दृश्य देखियो ।
होटलमा आयौं । त्यहाँ पाइने यथेष्ट ब्रेक फाष्ट ग¥र्यौ । ब्रेकफाष्ट गर्दा गर्दै मैले साहुजीलाई सोधे – इ. मोहन कायस्थलाई चिन्नुहुन्छ ? चिन्छु । काठमाण्डुबाट यहाँ आइरहनुहुन्छ । पोहोर किताप पनि वाड्नु भएको थियो । घर उ पर छ भनेर औलाले देखाए ।
फेरि सोधें – मुरारी मोहनलाई चिन्नु हुन्छ । अन कनाउर्दै भने – खोइ याद आएन ।
हामी गाडि भए ठाउँमा आयौं । गाडिको सीत पुछ्दा पुछ्दै माथि डाँडातिर हेरें ।
बजार माथि, अग्लो पहरो । पहराको थाप्लामा झ्याम्म वन ।
मैले सोधे– त्यो डाँडामा के छ ?
उसले भन्यो – (होला कुनै ड्राइभर) त्यहाँ थानमाईको मन्दिर छ ।
सीतले नुहाएको गाडि सुकेपछि हामी लम्जुङ्को घले गाउँतिर लाग्यौं ।
पर्यटनका थुप्रै सम्भावनाहरु देखे बन्दीपुरमा । म पन्ध्र बीस दिन अधि भियतनाम, कम्बोडिया तिर घुमेर फिरेको हुँ । भियतनामको युद्ध टनेल, क्रुज र गुफाले थुप्रै डलर तानेको देखें । कम्बोडियामा सयौं बुद्ध मूर्ति हेर्न विदेशीहरु ओइरिएको देखें ।
यति सुन्दर बन्दीपुर ।
के यहाँ सधैं व्रेन ड्रेन मात्रै गरीरहने । साहुजीहरुलाई चितवन र काठमाडौं पठाइरहने । गर्नुस् । हुन्छ । संभावानको खानी हो बन्दीपुर । डलर ओइरिन्छ ।
(२०७४ मंसिर २८)